विद्युतका पोल प्रयोग गर्दा सोध्दैनन् | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / विद्युतका पोल प्रयोग गर्दा सोध्दैनन्
विद्युतका पोल प्रयोग गर्दा सोध्दैनन्
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार June 26, 2019	0 54 Views
घोराही। ठूला–ठूला तारका गजुल्टा बोकेर ठिंग उभिएका विद्युतका पोलहरुले शहरवासीमा अनेकौं अडकल काट्न बाध्य पारेका छन्। यत्रो फोहोर ? यति धेरै केको तार ? कतै आगो लाग्यो भने के हुन्छ ? बिग्रियो भने पनि पत्तै लगाउन मुस्किल। मुख्य शहरका विद्युतका पोलले यस्तै–यस्तै जिज्ञासा उब्जाउ“।
नया“ विस्तार गर्दा अनुमति नलिने चलनले विद्युतका पोलहरुमा अनावश्यक बोझ थपिदै गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही वितरण केन्द्रका प्रमुख मधुसूदन यादवको भनाइ छ। त्यसभन्दा खतरा अनावश्यक तार पोलमै गुजुल्टो पारेर छोड्ने गरिन्छ त्यसले भारी बनाउ“छ।
कतिपय कम्पनीहरुले जलेको तार पनि निकाल्दैनन्। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नया“ तार विस्तार गर्छन् पुरानो त्यहीं रहन्छ निकाल्दैनन्। जतिवटा तार हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा कैयौं बढी तार विद्युतका पोलमा टंगाइएको छ। त्यसकारण पनि अनावश्यक फोहोर पोलमा जम्मा भएको छ।
कतिवटा तारहरु विद्युतका पोलमा टंगिएका छन् भन्ने पोल ढलेपछि मात्रै पत्ता लाग्ने विद्युत कार्यालयले बताएको छ। कार्यालय प्रमुख यादवका अनुसार छिटोछरितो सेवा दिनेमा कर्मचारीको ध्यान हुन्छ। थोरै कर्मचारी छन्। सेवा ग्राहीलाई दुःख दिने, हैरानी पार्ने र लामो समय कुराउने होइन भनेर कर्मचारी खटेका हुन्छन्। कुन पोलमा के टंगाएको छ भनेर खोज्ने फुर्सदै हु“दैन। त्यही मौका छोपेर होडिङबोर्डलगायत जथाभावी कुरा पोलमा टा“ग्छन्।
अहिले होडिङबोर्डहरु टंगाउने क्रम भने घट्दै गएको प्रमुख यादवको भनाइ छ। उहा“का अनुसार पोलमा टा“गेको होडिङबोर्डले विद्युतको लाइनमा समस्या ल्याउछ भन्ने धेरैले बुझेका छन्। त्यसले हल्लाएर नेटवर्क जान्छ, टिभीको लाइन बिग्रिन्छ, फोन काटिन्छ र बत्ती बिग्रिन्छ भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छन्। विद्युतका पोल सफाइ र अनावश्यक तार टंगाउनुहुन्न भन्ने चेत अझै खुलेको छैन। एउटा बिग्रिन्छ त्यसैमा थप्यो अर्को बिग्रन्छ थप्यो गर्दा गर्दै तारको पुलो बनाउने गरिन्छ ।
होचा तारहरु जेल्लिएर सवारी दुर्घटनाको खतरा उत्तिकै छ। सवारी साधनले झट्कार्दा पोलमा धक्का दिने र विद्युतका तार आपसमा जुझ्ने खतरा हुन्छ। आपसमा ठोक्किएपछि आगोको झिल्का उठ्छ। त्यही झिल्काले प्लाष्टिकले मोडेका तारमा आगो सल्किन्छ। त्यसरी लागेको आगो तारबाट घरसम्मै आउनसक्छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जाग्नुपर्ने प्रमुख यादवको भनाइ छ।
केही समयअघि भरतपुरमा एउटा पोल ढलेको त्यसमा टा“गिएका तार निकाल्न कसैले चासो नदिएको अनुभव सुनाउनुभयो। उहा“का अनुसार आफ्नो तार उठाउन नआएपछि विद्युतले उनीहरुका पनि कटाइदिनुपर्छ। निजी कम्पनीहरुले आफ्ना संरचना विस्तार गर्दा जानकारी गराउनुपर्नेसम्मको सामान्य नियम पनि पालना गर्दैनन्।
गुनासो जति विद्युतले सुन्ने आफ्नै कर्मचारी पोलमा चढ्न नसक्नेगरी तारहरु गुजुल्टिएको प्रमुख यादवको भनाइ छ। उहा“का अनुसार चढे पनि प्वाइन्ट पत्ता लगाउनै मुस्किल हुनेगरी तार छन्। विद्युतलाई नसोधेर पोलमा कुनै पनि कुरा टा“ग्न पाइ“दैन। ‘समन्वय गरेपछि दुःख दिदैनांै’– उहा“ले थप्नुभयो– ‘राम्रो बनाउन आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन्छौं।’ उहा“ले माकुराको जालो जस्तो तार बढ्नुको कारण पनि समन्वय नहुनुलाई दोषी देख्नुभयो। केही फाइवर नेटवर्क कम्पनीलाई पत्र लेखेर समन्वय गर्न आग्रह गरेपनि जवाफ नदिएको भनाइ थियो। अहिले नीति नियम बनिनसक्दासम्म कर नतिरे पनि व्यवस्थित गर्न उहा“ले आग्रह गर्नुभयो।
Previous: बबईमा ३५ करोड ८८ लाख बजेट
Next: सामुदायिक विद्यालय सुधार्न दशकीय कार्यक्रम
जेसीजद्वारा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री
सीतापुर घटना :दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छः देउवा
‘विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउन भूमिका निर्वाह गरौं’